नयनराज पाण्डेको वालबाट
कि ‘लुट’ छ, कि ‘छुट’ छ। ‘छुट’ छ र त ‘लुट’ छ। पहिला ‘लुट्छ’, पछि ‘छुट्छ’। फेरि ‘छुट्छ’, अनि फेरि ‘लुट्छ’। खेला यही चल्छ नेपालमा।
राजनीति ‘विचार’ बनेर दिमागमा बसेको भए पो बहस र छलफलको लागि ‘स्पेस’ रहन्थ्यो। तर, हामीकहाँ त यो ‘अफिम’ बन्यो र यसले दिमागका सबै ढोका बन्द गरिदियो। यस्ता ‘अफिमची’का लागि राजनीति कर्मकाण्ड बनेको छ र नेताहरू भगवान् बनेका छन्। भगवान्का मूर्खता अफिमचीका लागि रोचक लीला पो बन्दा रहेछन्।
यो देश, हाम्रो समाज र हाम्रो परिवार बिग्रेको खासमा ‘निलो चोली’ उपन्यासले हो। त्यो उपन्यास नछापिएको भए २०३६ सालमै गणतन्त्र आउँथ्यो। देश उहिल्यै स्विट्जरल्यान्ड भैसक्थ्यो। देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदैनथ्यो। एम सर र आलम साब काण्ड हुँदैनथ्यो।
कुनै बेला अनशन बसेको थिएँ। दुई दिनमै झण्डै मरेको। अब कहिल्यै बस्दिनँ। झगडा त बलियो भएरै गरेको ठीक !
‘सत्य’ पचाउन गाह्रो हुँदो रछ। बाजेबजुले भनेकै यै। फरक मत राख्न मुन लागेन। अपचको रोगबाट बचुम्।
विनाश नगरी विकास नहुने नै रहेछ। चिन्ता नगरौँ। यसै पनि मानिस भन्ने प्राणी यो पृथ्वीमा अब दुईचार सय वर्षभन्दा बढ्दा कहाँ रहला र ? लोप हुनै छ भने बोटबिरुवाको लोभ किन ?
दृश्यहरू गोलमाल भएका छन्। चश्मा त ठीकै छ भन्ने लाग्छ। यता हिलो, उता रछ्यान। खै, कतातिर उभिएपछि सबै ठीक, सबै छर्लंग र सबैको सक्कली अुनहार देखिएला !
हाम्रो राजनीति नाटकीय दृश्यले भरिपूर्ण सिनेमाजस्तो छ। ‘१८ प्लस’ले हेर्न मिल्ने एक्सन, नाचगान र रसरंगले भरिपूर्ण छ। यहाँ हँसाउने पनि छन्, रिसाउने पनि छन्। कथानक बडा कमजोर छ। पटकथा झनै कमजोर। संवाद द्विअर्थी छन्। यो सिनेमाले अन्त्यमा प्रायः दुःखी बनाउँछ। मेरो रेटिङ १.५÷५।
बालबालिकालाई प्रविधि÷युट्युबले बिगार्ने हैन। समस्या अभिभावकले आफ्ना सन्तानसित कति समय बिताउँछन् र तिनीहरूसित कति संवाद गर्छन् भन्नेमा छ। खेल मैदान र पार्क मिचिँदै छन्। आफ्नो साथी आफैँ बन्नुपर्ने स्थिति छ। समस्या एकातिर, बहस अर्कातिर। हाम्रो अहम् र आत्मरतिले बहसलाई ‘गलत’ दिशामा लाँदै छ।
मैले भिटेनको गीत नहेर्न मिल्छ। त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ। तर, एम सरजस्ताको व्यवहारले समाजमा उत्पन्न हुने बेथितिलाई मैले बाँचुञ्जेल भोगिरहनुपर्छ। त्यो पीडा मैले मात्र हैन, मेरो परिवार र मेरो समाजले पनि भोग्छ। राजनीतिको खोलमा देखापर्ने अश्लीलताले मुलुकलाई नै पिरोल्छ र गतिछाडा बनाउँछ।